Vaovao - Manana ekipa matanjaka aorian'ny varotra, debugging sy fikojakojana fitaovana maharitra manerana ny firenena
[Famintinana famaritana] Hebei Xinguang Carton Machinery Manufacturing Co., Ltd. dia any atsimon'ny renivohitra Beijing sy avaratry Jinan. Manana fitaterana an-drano sy an-tanety tena mety izy io. Orinasa matihanina izy io miaraka amina famokarana milina baoritra sy milina fanontana. Ny orinasa dia manana fitaovana milina feno, diplaoma avo lenta, fanandramana manankarena, tanjaka ara-teknika matanjaka, fomba fitsapana mandroso, rafitra fitantanana feno, ary efa lasa ISO9001: 2000 fanamarinana rafitra fitantanana kalitao iraisam-pirenena (laharana fisoratana anarana: 03605Q10355ROS), ny kintana mihamiratra avy amin'ny indostrian'ny milina fanontana carton an'ny fireneko. Ny vokatra avy amin'ny orinasanay dia manana maodely mekanika maro, miavaka manokana ary afaka mifankahita
Hebei Xinguang Carton Machinary Manufacturing Co., Ltd. dia miorina eo atsimon'ny renivohitra Beijing sy avaratry Jinan, miaraka amin'ny fitaterana rano sy tany mety be. Orinasa matihanina izy io miaraka amina famokarana milina baoritra sy milina fanontana. Ny orinasa dia manana fitaovana milina feno, diplaoma avo lenta, fanandramana manankarena, tanjaka ara-teknika matanjaka, fomba fitsapana mandroso, rafitra fitantanana feno, ary efa lasa ISO9001: 2000 fanamarinana rafitra fitantanana kalitao iraisam-pirenena (laharana fisoratana anarana: 03605Q10355ROS), ny kintana mihamiratra avy amin'ny indostrian'ny milina fanontana carton an'ny fireneko.
Ny vokatray dia manana maodely mekanika maro sy mombamomba azy feno izay afaka mahafeno ny fepetra takian'ny mpampiasa samihafa. Ao anatin'ny fanahin'ny "Mihatsara hatrany" sy "Mitarika ny tampony", ny orinasanay dia mampiroborobo ny fitantanana kalitao feno. Ireo vokatra novokarina, noho ny fisehoany tsara tarehy, ny asa-tanana henjana sy feno, ny vidiny mirary ary ny serivisy aorian'ny fivarotana tonga lafatra, dia noraisin'ireo mpampiasa erak'izao tontolo izao nandritra ny taona maro.
Ny orinasa dia manana mihoatra ny 30 taona ny R&D sy ny fanandramana traikefa. Ny orinasa dia nifikitra tamin'ny foto-kevitry ny serivisy momba ny "kalitao ho antoka, serivisy ho tanjona ary ho an'ny mpanjifa", ary miditra amin'ny haitao mandroso, fahalalana matihanina ary fitantanana informatika. R&D ary famokarana fitaovana famokarana birao mihombo. Miorina amin'ny ankehitriny, mijery ny ho avy, miatrika ny filana maika ny fanavaozana ny milina baoritra mandroso ankehitriny, dia hiara-hiasa am-pientanentanana bebe kokoa isika, hanamafy ny fitantanana anatiny, hanitatra ny ivelany ny tsena, hampitombo ny fikarohana siantifika, hikaroka ary hamolavola karazana vokatra vaovao , ary manatsara ny vokatra efa misy Ny indostrian'ny fampisehoana ataon'ny orinasa dia miezaka manome anao fiadanan-tsaina 100% sy fahafaham-po 1.000 amin'ny vokatra avo lenta sy mora vidy ary serivisy feno aorian'ny fivarotana, ary tena mahatsapa ny toe-javatra mandresy!